Wasiir ku-xigeenka gaashaan-dhigga DF oo is casiley
February 7, 2015 (GO)- Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi (Cabdiraxmaan Dheere) ayaa iska casiley xilkii labo maalmood kahor Ra'isal Wasaare Cumar Cabdirashiid usoo magacaabay ee ahaa Wasiir ku-xigeenka Gaashaan-dhigga.
Cabdiraxmaan Dheere oo la hadlay warbaahinta Muqdisho, wuxuu sheegay in sababta keentay inuu xilkaas iska caliso tahay maadaama markii la magacaabayey aan isaga wax wadatashi ah lagala sameyn xilkuna yahay mid aan lagu saleyn hannaanka awood qaybsiga ee saxda ah, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Wuxuu sidoo kale sheegay in go'aankan uu qaatey kadib markii uu wadatashi ballaaran la sameeyey siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha uu kasoo jeedo.
" laygalama tashan mgacaabista la ii magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaan-dhigga Soomaaliya, waana mid khilaafsan hannaanka awood qaybsiga beelaha" ayuu yiri.
Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi (Cabdiraxmaan Dheere oo ah xildhibaan ka tirsan Barlamanka Federaalka, horay ayuu usoo noqdey wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaashaan-dhigga xiligii xukumadii Ra'isal Wasaare Saacid.